Umbhede Olengayo, Ichibi langasese kanye nePharadesi likaMaids-Priti
IPriti’s Paradise ikunikeza okuhle kunayo yonke imihlaba: ipharadesi eliyiSuncoast yaseFiji, amalungelo okuvakasha, ikhaya lakho langasese eline-master suite nobhavu oshisayo, amagumbi avulekile, amakamelo okulala ama-3, ikhaya lamaholide okugeza angu-3 elisendaweni echumayo. I-waterfront ephelele, imaski kanye nama-snorkel ahlinzekelwe ukuhamba nge-snorkeling okungenamkhawulo.
I-Starfish Blue inechibi langasese, umbhede olengayo, imibono ekhuthazayo evela kuvulandi wakho nokufinyelela ogwini kanye nombono omangalisayo wolwandle olugcwele amakhorali neziqhingi ezi-3.
Ukuthinta okwengeziwe kwenza i-Priti's Paradise (ngaphambilini eyayaziwa ngokuthi i-Starfish Blue) ibe iholide elihle. Ngokusebenzisa ulwandle egcekeni elingaphambili, sihlinzeka ngezifihla-buso nama-snorkel mahhala, ukuhamba nge-snorkeling okungenamkhawulo. Amanzi azole ngokwedlulele ngenxa yezixhobo zamatshe kanye neziqhingi ezi-3, ngezinye izikhathi azinawo ngisho ama-ripple, okuwenza abe phakathi kwezindawo ezihamba phambili emhlabeni zokudoba i-snorkel.
Izincekukazi zethu ezimomothekayo ziza izikhathi ezi-5 ngesonto. Bafana nenganekwane yomlingo, bayaqoqa. Ngenani elincane, bazopheka. Engikuthandayo ukudla kwasekuseni- idili elizohlala kuze kube ntambama, futhi bayahlanza! Yini engaba ngcono.
Ikhishi lifakwe kahle ngakho konke okudingayo ukuze ulungiselele ukudla, noma ungadlela ngaphandle. Wonke ama-linens, kuhlanganise nama-pool towels afakiwe.
4.25(12 okushiwo abanye)
4.25 · 12 okushiwo abanye
Awukwazi ukufinyelela endaweni eyodwa, kodwa ezimbili zokungcebeleka ngesikhathi sokuvakasha kwakho. I-Volivoli Beach ivuliwe unyaka wonke, futhi iyimizuzu eyi-10 ukushayela. I-Wananavu Beach Resort iyibanga elihamba ngezinyawo, kodwa ivalwa ngezikhathi ezithile ukuze kwenziwe imisebenzi yangasese. Zombili zinhle.
Ngingathintwa noma nini ngoWhatsapp noma nge-imeyili